Iimeko zentlekele ezivela kwimarike | Ezezimali
Imeko zentlekele ezivela kwimarike
UJoseph kwakhona | | Bolsa, Ezopolitiko kwezoqoqosho, Iimveliso zezemali
La imeko apho ezinye kwezoqoqosho ekuthiwa zisahlumayo zihamba khona, ziqhutywa yingxaki ye ETurkey naseArgentinaIya kuvelisa uthotho lwamathandabuzo kuqoqosho lwehlabathi kwaye kunjalo nakuqoqosho. Ukongeza, iya kuba luvavanyo lwe-litmus ukubonisa ukuba iimarike zezabelo ziya kuguquka njani kwiinyanga ezizayo. Apho kufuneka ukhuselwe kwinto enokwenzeka.
Ewe, uguquko lwamazwe asahlumayo luya kuba yithemometha egqwesileyo kwizicwangciso oza kuzisebenzisa ekusebenzeni kwiimarike zezemali ngakumbi kwimarike yemasheya. Akunakulityalwa ukuba kwezi nyanga zehlobo ialam zihambile phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi ngaphambi kokubhengezwa kukaMongameli wase-United States, uDonald Trump, malunga nokuba ingaba injongo ecacileyo yokuyiphinda kabini irhafu yealuminium ukusuka kwelinye lala mazwe, anjengeTurkey. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba i-lira yaseTurkey ivelise ukuwa kufutshane ne-10% xa kuthelekiswa nedola yaseMelika, ngokuhla kwe-50% ngonyaka
Kule meko, ezinye iindaba ezixhalabisa kakhulu kuqoqosho lwehlabathi ziye zongezwa, eziboniswayo kwiimarike zezabelo kwaye abo baphambili babo lelinye lawona mazwe avelayo. Njengomzekelo, eArgentina apho ubunzima buhlile Ngexabiso laso ngenxa yokoyika okubonakalayo malunga nokubanakho kokungakwazi ukuthatha ukukhula kwetyala lalo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba iimarike sele zithetha ngokuvela kwecorralito entsha efana naleyo yenzeka phakathi kuka-2001 no-2002.
1 Ukuvela: inzala inyuka
2 Urhwebo lwehlabathi
3 Ivenkile yentengiso kwitown
4 Kwenzeke ntoni kokusingqongileyo?
5 Ukurhoxiswa kwesikhuthazo
Ukuvela: inzala inyuka
Le meko kwilizwe lase-Ibero-American ekugqibeleni ikhokelele i-Argentina ekhupha ibhanki ukuba ithathe isigqibo sokunyusa inzala, esele idlulile kwiintsuku ezimbalwa. Iipesenti ezingama-45 ukuya kuma-60%. Ngokubhekisele kwiimarike zemali, impendulo ibingakhathazeki kangako kwimidla yabatyali mali. Xa kukho ukwehla kwexabiso malunga neepesenti ezingama-50 zepeso yaseArgentina xa ithelekiswa nedola. Ngale ndlela, enye yeemarike ezichaphazelekayo yiSpanish ngenxa yokuvezwa kwayo kuqoqosho lwaseArgentina njengoko uninzi lweenkampani zaseSpain zikhona. Ngesi sizathu, isalathiso semilinganiselo yemarike yaseSpain iyeyona iye yachaphazeleka kulo nyaka.
Kodwa ayisiyiyo kuphela ingozi evela eArgentina. Ewe kunjalo, le meko ayisasazeki kwezinye iimali zamazwe asakhulayo. Umzekelo, inyani yaseBrazil, irandi yoMzantsi Afrika, ipeso yaseMexico okanye ngokufanayo Iruble yaseRussia. Esona sizathu sokuchaza le meko ikhetheke kakhulu amazwe asahlumayo adlula kuyo kungenxa yenqanaba eliphezulu letyala likarhulumente eligcinwa ngala mazwe, nangona iyimeko enobungozi kakhulu eye yenziwa mandundu zizinto ezithile ezinxulumene noku. Njengoko ulumkisiwe kwiNgxowa-mali yeMali yeHlabathi (i-IMF).
Kwelinye icala, ukumiselwa kweerhafu ezinzima yi-United States kulonakalisa kakhulu urhwebo lwamanye amazwe, njengoko kubonisiwe kwiimarike zesitokhwe phantse kwihlabathi liphela. Ukuya kuthi ga kumanqanaba angabonwanga kulo nyaka sele uza kuthi shwaka, ngaphandle kwamashishini aseMelika aphantse alingane amaxesha onke aphezulu. Uqikelelo lokukhula koqoqosho kwihlabathi kulo nyaka luyi-4,4%, nangona ingaphantsi kune-4,7% efunyenwe kunyaka ophelileyo. Ezinye iinkcazo zoku kwehla kungenxa yokwehla okuthile kuqoqosho lwaseTshayina.
Kungenxa yokuba inene uqoqosho lwase China Ikwachaphazeleka ziziphumo zamanyathelo okhuseleko eMelika kunye nefuthe lazo kwiimarike zamasheya zamanye amazwe zinokuba mbi kakhulu kunyaka olandelayo. Ngokukodwa, ngokubhekisele kwicandelo lebhanki kunye nezezimali ngokubanzi, yeyona nto ichaphazeleka kakhulu kubo bonke. Njengoko ubonile kwiiveki ezidlulileyo. Ngale ndlela, licandelo ekufuneka uliphephe ukubhengeza kwimarike yemasheya njengesicwangciso sokukhusela izikhundla zakho kwiimarike zezabelo.
Ivenkile yentengiso kwitown
Ewe, enye yeziphumo zokungazinzi okubangela amazwe asahlumayo yindiza evela kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Akumangalisi ke ukuba, kule meko, sele bebaninzi abatyali mali abathe bagqiba kwelokuba batshintshe inzala ephezulu enikezelwa zizitokhwe kunye neemarike zamatyala ezinikezelwa ngamazwe asahlumayo kwaye bafuna indawo yokubalekela kwezona ndawo zikhuselekileyo kwiimarike zezemali. Enye yazo kungoku nje yiNew York Stock Exchange, esineenkcazo ezifanelekileyo, Dow Jones, ikwiindawo eziphakamileyo zembali kwaye ngokuqhubekayo njengoko iinyanga zidlulile.
Kwenzeke ntoni kokusingqongileyo?
Ngayiphi na imeko, uninzi lwabatyali mali bajonga indlela le meko ivulekileyo kumazwe asakhulayo eYurophu kwaye ngokuqinisekileyo iSpain izakuchaphazela. Ewe, ii-indices zabo zijikile embindini wonyaka kwaye bayayibona indlela ii-indices zayo eziphambili zesitokhwe ziyawa. Nangona ingekabikho ngamandla kumazwe asakhulayo, njengoko bekusengqiqweni ukubona kwangaphambili ngabahlalutyi bezemali. Enye into eyahluke kakhulu yile inokwenzeka kunyaka ozayo kwaye amathemba abo awanabisi, ngokweengxelo ezivele kwiinyanga ezidlulileyo.
Kule meko, izizathu zokuchaza le ndlela yokuziphatha azifani kwaye zahlukile. Nangona eyona nto iphembelela lo mkhwa mtsha ikwinqanaba eliphezulu lamatyala anoqoqosho oluninzi lwaseYurophu, ngakumbi lawo akumazantsi ezwekazi elidala. Apho ukubonakaliswa kweebhanki zaseYurophu kuqoqosho lwaseTurkey naseArgentina kunamandla kakhulu. Ngokukodwa, ngokubhekisele kwi-Spanish banking BBVA enonxibelelwano olukhulu nelizwe lase-Ottoman. Into enokuba nobunzima kwindaleko ye-Ibex 35 ngenxa yokuxhomekeka kwayo kwicandelo lebhanki.
Enye inkcazo yokumisela le meko eyenzeka kwiimarike zezemali ilele kwilixa lokuba umzuzu wokurhoxiswa kwesikhuthazo semali ngurhulumente ukufuphi. KwiBhanki ePhambili yeYurophu (ECB). Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba le nyathelo lixoxwe kakhulu linokubeka engxakini imali yenkampani esekwe kumda we-euro. Ngale ndlela, uhlalutyo lweebhanki lubonisa ukuba imarike yemasheya inokubonisa ilahleko ukusukela ngoJanuwari, kwaye kwezinye iimeko iphantsi kwamandla amakhulu. Akusayi kubakho khetho ngaphandle kokulungela le meko intsha inikwa ziimarike zesitokhwe zaseYurophu kunye neSpanish ngokukodwa.
Ewe kunjalo, iSpain kunye neemarike zayo zezemali azizukuyiphelisa le meko yamazwe aphesheya kwaye ubungqina boku kukuhla kwexabiso lezabelo zamazwe ukusuka ngo-Epreli. Nokuba ku izinto zingaya zisiba mbi, ngokoluvo lwabanye abahlalutyi abanomdla kwezemali. Elona cebiso lililo kubatyali mali kukuba kwindawo enamanzi kwinto enokwenzeka kwinto elandelayo. Njengesicwangciso sokusebenzisa amathuba eshishini aya kuthi ngokuqinisekileyo avele ukusukela ngoku. Ngamaxabiso esitokhwe anokukhuphisana kakhulu kunangaphambili.
Kucacile ukuba inqanaba eliphezulu lamatyala kumazwe asakhulayo nasele ephucukile angayenza mandundu imeko kwezi nyanga zizayo okanye nakwiminyaka ezayo. Ukuthintela le meko ingathandekiyo, ngekhe kube buhlungu ukusebenzisa izikhokelo zenyathelo eliya kuba neyona njongo iphambili yokukhusela ulondolozo lwakho ngaphezulu kwezinye izinto zobugcisa. Njengoku kulandelayo esiza kukuveza ngezantsi:
Ayiloxesha lilungileyo lokutyala imali kwimarike yemasheya. Ungajonga enye ezinye iindlela ezinenzuzo, ezinjengezinto ezisetyenzisiweyo okanye izinto ezinqabileyo.
Lixesha lokuba ndikunike ikhefu kwaye uqaphele ukuba iingxowa ziguquka njani phambi kwezi ngxaki zichazwe apha ngasentla.
Kukhethwa ukuba ufumane khu seleko Kwiimveliso zezemali, kuya kufuneka ujonge imbuyekezo ephezulu kakhulu ekugqibeleni abangayi kuba nako ukukunika yona.
Ingeniso esisigxina iya kwenza phakamisa umdla wakho Kwaye isenokuba lixesha elifanelekileyo lokuphinda uqalise olu hlobo lotyalo-mali osele ulibale ixesha elide.
Ungalibali ukuba ungenza nokonga kwakho unenzuzo ngalo ibhegi phantsi. Ngokusebenzisa iimveliso eziguqukayo okwangoku ezinokuba lithuba elihle lokufumana inzuzo ephezulu. Nangona ingozi iphezulu.
Awuyi kukhetha kodwa Ulwahlulo olwahlukeneyo, apho iimveliso zengeniso esisigxina kufuneka zibe nendawo kwipotfoliyo yakho elandelayo yotyalo-mali. Hayi ngelize, uya kuba nengeniso esisigxina kunye neqinisekisiweyo minyaka le, nangona ingekho phezulu kakhulu. Kodwa sisindululo esingafanele ukusilela kumaxesha okungazinzi okukhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Imeko zentlekele ezivela kwimarike
Iingcebiso ezi-7 zokuphumelela kwimarike yemasheya kwaye ujongane nokungabikho kwemali
Usuku, konke okanye akukho nto ngonyaka we-2019